ပုဂံလဲ အခုအချိန်ပြန်ဖွင့်ပြီဆိုတော့ ခရီးတွေသွားဖို့ ပြန်ပြီး စဥ်းစားနေကြပြီပေါ့… ကိုယ်တွေလဲ ဘယ်ရက်လေးတွေ သွားရမလဲ ချောင်းနေတာနော်….. ?? သွားကိုသွားရမှဆိုရင်တော့ စဥ်းစားရမှာ ဘယ်လိုသွားမလဲ ဘယ်မှာတည်းရမလဲ? တည်းတဲ့အခါလဲ အဆင်ပြေပြေနဲ့ သက်သက်သာလဲ ဖြစ်၊ အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့နေရာဆိုတာ ဘယ်နေရာဖြစ်မလဲ? ‌ညောင်ဦးမြို့ဘက်လား? ပုဂံမြို့ဟောင်းဘက်လား? ပုဂံမြို့သစ်ဘက်လား? ဘုရားတွေနဲ့ရော နီးရဲ့လား?၊ ပုဂံနဲ့ညောင်ဦးနဲ့ဝေးလား?။ စသည်ဖြင့် စဥ်းစားကြရမှာပေါ့၊ ဒီမေးခွန်းဖြေဖို့ အရင်ကိုယ့်ဘာကိုယ်မေးရမဲ့မေးခွန်းတွေက…